USihlalo weBhodi Yezokuvakasha yase-Afrika kanye Namanxusa Manje Avakasha Enyakatho neTanzania
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika » USihlalo weBhodi Yezokuvakasha yase-Afrika kanye Namanxusa Manje Avakasha Enyakatho neTanzania
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Izindaba ZaseTanzania • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Usihlalo we-African Tourism Board kanye nama-Ambassadors ohambweni lwaseTanzania.
USihlalo we-African Tourism Board, uMnu Cuthbert Ncube, ubephelezelwa yithimba lamanxusa e-ATB ohambweni lokuzijwayeza ulwazi eNyakatho neTanzania ngemuva kokuqeda umbukiso wezokuvakasha esifundeni iFirst East African Regional Tourism Expo izolo, ngoMsombuluko, Okthoba 11, 2021.
Lolu hambo luqale emagqumeni eMount Meru esifundeni i-Arusha.
Iqembu labo bese livakashele iTengeru Cultural Tourism Programme ebhekele ukulondolozwa kwemvelo eMount Meru.
USihlalo we-ATB kanye nethimba lakhe bazovakashela nezingxenye zesifunda saseKilimanjaro emagqumeni eNtaba iKilimanjaro ohambweni lwabo oluqhubekayo lokuzijwayeza.
The Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika (i-ATB) Usihlalo nethimba lakhe lamaNxusa baqale uhambo lwabo namuhla emagqumeni eMount Meru esifundeni i-Arusha ngokuhambela ngenhlonipho iTengeru Cultural Tourism Programme, isikhungo esesungulelwe ukuhlela nokuhlinzeka ngohambo lwezamasiko.
Uhlelo lweTengeru Cultural Tourism Programme lunikezelwe futhi ekulondolozeni imvelo emithambekeni yeMount Meru, isiqongo sesibili esiphakeme kunazo zonke eTanzania. Lolu hlelo futhi luzinikele ekuheheni abavakashi bakuleli nabakwamanye amazwe abanesifiso sokuchitha amaholide abo nomphakathi wasendaweni bese bezinikela ngokuzithandela ukufaka isandla ekuthuthukiseni amaphrojekthi ahlukahlukene ezenhlalo nezomnotho azuzisa abantu bendawo.
Ebekwe phakathi kweMount Meru neMount Kilimanjaro, i-Arusha National Park kungenye indawo eheha abavakashi, ebibandakanya ababambe iqhaza engqungqutheleni ngemuva komhlangano wabo obusedolobheni i-Arusha. Itholakala phakathi kweziqongo ezimbili ezincintisanayo futhi ezibheke phezulu eNyakatho neTanzania, i-Arusha National Park inikeza ukuphunyuka okusheshayo kubantu abafuna ukuphumula ngempelasonto, ikakhulukazi bevela emadolobheni amatasa njenge-Arusha neMoshi eNyakatho neTanzania.
Lesi siqiwu silawulwa kakhulu yiMount Meru, okungamamitha angu-4,566 (14,980 feet), okuyintaba yesibili ephakeme kunazo zonke eTanzania. Ipaki ibheke amathafa asentshonalanga yeKilimanjaro emithambekeni yeNtaba iMeru enikela ngemikhankaso yokuhamba ngezinyawo ikakhulukazi kubavakashi abavela eTanzania, eMpumalanga Afrika, nakwezinye izingxenye zomhlaba. Laziwa kakhulu ngamachibi ayi-7, amachibi amaMomella ngaphakathi kwemingcele yawo, kanye nenani elikhulu lezinyathi ezindala kakhulu uma kuqhathaniswa namanye amapaki aseTanzania.
Embozwe engxenyeni enkulu yosuku, iNtaba iKilimanjaro, intaba ende kunazo zonke e-Afrika, ihlukile Indawo yokuvakasha yaseTanzania, iheha abagibeli abangaba ngu-60,000 XNUMX unyaka ngamunye. INtaba imele isithombe se-Afrika somhlaba wonke, futhi isigaxa saso esilinganayo, esineqhwa esilinganayo sifana ne-Afrika.
Kumazwe omhlaba, inselelo yokufunda, nokuhlola, nokuqwala le ntaba engaqondakali ithathe imicabango yabantu emhlabeni wonke. Kuze kube namuhla, iNtaba iKilimanjaro ibiwuphawu lwemisebenzi eyahlukahlukene kuzwelonke nakwamanye amazwe, ezamabhizinisi, kanye nezepolitiki. Izinkampani zamabhizinisi kanye namaqembu ahlukahlukene omphakathi anokubhaliswa kwawo anegama leNtaba iKilimanjaro ukuveza ubukhona bawo obubabazekayo.
Ngo-1961, ifulegi leTanzania elalisanda kuzimela lanyuselwa entabeni ukuze lindiza phezulu, futhi isibani senkululeko sasikhanyiswa esicongweni ukuze kuvuselelwe umkhankaso wezepolitiki wobunye, inkululeko nobuzalwane.
INtaba iKilimanjaro ihlala iwuphawu nokuziqhenya kwe-Afrika ngokugqama kwayo kwezokuvakasha. Le ntaba ephakeme kunazo zonke e-Afrika ibalwe phakathi kwezindawo ezingama-28 zokuvakasha emhlabeni ukuzijabulisa impilo yonke.
Impilo yasebusuku emhlabeni wonke ibuya kancane kancane
I-Wellbeing Magazine ifaka uKen Kladouris
I-FAA ibeka indawo engenampukane ngaphezu kwebhuloho laseTexas eligcwele ...
Ungakwakha Kanjani Ezokuvakasha Kwezombusazwe Okubandakanyekayo? Injongo ...
Ukushiya Iphrinta Eluhlaza ngenkathi useholideyini eSeychelles
IHungary Ivumela Ukungena Kwigciwane eligonywe ngokuphelele laseRussia ...
Ukubuyisela Umthetho Womkhiqizo wase-USA Kuvunyelwe Yisigungu Sase-US
Izindiza ezintsha ze-KLM ezisuka e-Amsterdam ziya eBarbados
Abalingani beSouth African Airways kanye ne-Emirates eNingizimu ...
AbaseMelika Abagonywe Ngokugcwele Batshelwe Ukugqoka Amaski Obuso ...
Izinhlangano Zezokuvakasha Zingakhuthaza Kanjani Ukusimama ...
UNgqongqoshe Wezokuvakasha waseJamaica uhlangana neDominican Republic ...
AmaTaliban: Abantu bokufika kuphela abangashiya i-Afghanistan ...
IGLTA Global Convention ezoba seMilan ngo-Okthoba 26 ...
IJamaica Inxusa Abahambi: Landela Ukuhlukaniswa ukuze ...
Ivelaphi iCoronavirus ngempela?
Abasebenza e-India Tour: Ungawathola kanjani ama-US $ 400 billion ku ...
Izindiza ze-Nonstop San José eziya eChicago zibuyela eMelika ...
IBangkok ilungiselela inhlekelele enkulu yezikhukhula
ISpanish Canary Islands zilungiselela ukusondela ...